I-WordPress: Ama-plugins amabili we-SEO we-Meta Tag Creation | Martech Zone
I-WordPress: Ama-plugins we-SEO amabili we-Meta Tag Creation
NgoLwesithathu, July 4, 2007 NgoLwesine, ngoMashi 31, 2016 Douglas Karr
Ngibhale okuthunyelwe okubili okuhlukile ekwakheni ama-meta tag, amagama angukhiye ne izincazelo. Amagama angukhiye nakanjani azosiza kusayithi lakho ukutholakala, kepha izincazelo zizosiza izivakashi zenjini yokusesha ukuthi zichofoze ngokunikeza incazelo engcono.
Esikhundleni sokuhlela lokhu kulungiselelwa njengoba ngiphakamisile, kukhona ama-plugins ambalwa angakwenzela lo msebenzi.
Nge I-Yoast SEO i-plugin ungalawula ukuthi imaphi amakhasi aboniswa i-Google emiphumeleni yawo yosesho nokuthi imaphi amakhasi angawabonisi. I-Yoast ayikusizi nje kuphela ukwenza ngezifiso izincazelo ze-meta, futhi ikunikeza nempendulo ekusetshenzisweni kwegama lakho elingukhiye nokubuka kuqala okuhle kokuthi ikhasi lakho lizobukeka kanjani ekhasini lemiphumela ye-Search Engine.
I-Yoast iphinde inikeze ukukhethwa kwe- Ama-plugins we-Premium we-Premium we-SEO ukuthi ngincoma kakhulu futhi.
Konke ku-One SEO Pack
UJohn Chow Kunconywa Konke ku-One SEO Pack Plugin kepha angikaze ngiyibuke kahle i-plugin kuze kube izolo ebusuku. Amahloni kimi. I-plugin yenza umsebenzi omuhle ekusebenziseni i- "Optional Excerpt" yakho ku-WordPress njengencazelo yekhasi lakho elilodwa.
Nakhu ukuthi umphumela wenjini yokusesha ubukeka kanjani (ungachofoza esithombeni ukubona okuthunyelwe kwangempela):
Lokho kusho ukuthi i-All in One SEO Pack yenza umsebenzi omuhle nge-Meta Tag yencazelo, kepha angikholwa ukuthi yenza umsebenzi omuhle nge-Keyword Meta Tag. Imane inikeze izigaba zakho ozikhethile njengamagama asemqoka kokuthunyelwe kwakho, hhayi cishe okuchazayo ngokwanele. Ungasetha amagama angukhiye angeziwe wokuthunyelwe, kepha awasetshenziswa kwenye indawo.
Yilapho kufika khona isincomo sami esilandelayo se-plugin, Ultimate Tag Warrior. Nakhu ukuthi ungaqinisekisa kanjani ukuthi awubhali umaki wegama elingukhiye usebenzisa i-All in One SEO Pack, khubaza inketho Sebenzisa Izigaba zamagama agqamile e-META:
Manje ngaso sonke isikhathi uma ubhala okuthunyelwe kwebhulogi, qiniseka ukuthi ugcwalisa inkambu ye-Optional Excerpt ngemisho embalwa elula ezodonsa abaseshi abaningi ukuthi bacofe okuthunyelwe kwakho:
Tags: konke ku-pack eyodwa ye-seometaincazelo metaumaki we-metaseoyoast seo
KungoJulayi 4: Sekela Inkululeko Yokubloga e-United States
Jul 9, 2007 ku-7: 55 AM
Vumelana nawe mayelana nokuhlanganisa ama-plugins amabili, uDouglas. Ngisanda kufaka i-All In One kwenye yamasayithi wami futhi iyi-plugin enhle kepha, njengoba usho, into esemqoka ayiyona enkulu kunazo zonke. Lokho okushiwo okuthandwa yiGoogle akubeki isisindo esiningi kumagama angukhiye futhi kugxile kusihloko nencazelo esikhundleni salokho.
Jul 12, 2007 ngo-3: 19 PM
Siyabonga ngalokhu. Izingcaphuno zokuzikhethela yinto engiyisebenzise esikhathini esedlule kepha hhayi ngempumelelo ngangokunokwenzeka. Okuthunyelwe kwami ​​okuningi okudume kakhulu kushoda ngcaphuno ngokuphelele.
Ngizobuyela emuva ngiqiniseke ukuthi okuthunyelwe kwami ​​okuphezulu okungama-20 okuthandwa kakhulu kunengcaphuno ehloniphekile, kanye nanoma yikuphi okusha engikubhalayo ngokuzayo. Ngizobheka futhi kuleyo plugin ye-SEO.
Aug 21, 2007 ngo-1: 52 PM
> Kungakuhle impela uma laba babhali ababili bengabeka amakhanda abo bahlanganise ama-plugins amabili abe munye.
Iphakethe le-SEO lingasebenzisa amathegi avela ku-UTW njengamagama asemqoka uma usetha le ndlela, kepha njengoba uncoma ungavumela ne-UTW ukuthi iphathe amagama angukhiye e-meta. Njengoba wazi ukuthi inguqulo yokugcina ye-UTW ibiphelile, ngoba i-WordPress 2.3 izobe inokwesekwa kwamathegi okwakhelwe ngaphakathi. Iphakethe le-SEO cishe lizosekela izihloko zamathegi kungekudala, zombili nge-UTW ne-WordPress 2.3. Uma unezinye izicelo zokuhlanganisa ezengeziwe ungazise.
Sep 14, 2007 ngo-7: 40 PM
Njengawo wonke umuntu nginawo ama-plugins kubhulogi lami. Kepha kubukeka sengathi bayakhansela ngandlela thile. Siyabonga ngendlela ebonakalayo yokubenza basebenze ndawonye.
Inkambo Yokuqeqesha ye-SEO
Dec 16, 2007 ku-10: 06 AM
Imicabango emihle kulokhu. Ama-meta tag ayingxenye ebalulekile yokusetha indawo ephumelelayo, ne-search engine enobungane, nokuba khona kwewebhu.
Kuyahlekisa ukucabanga ukukhuluma ngomaki wamagama we-meta. Sonke sibonakala siyisebenzisa. Bengilokhu ngisebenzisa amawebhusayithi iminyaka engaphezu kwengu-10, kusukela emuva ngaphambi kokuthi size sibone ukuthi sisebenza kahle! Namuhla siyazi ukuthi izinjini ezinkulu azibheki nokubheka amagama angukhiye ... noma kunjalo sicabanga noma kunjalo.
Uma kunjalo, kungani sisebenzisa ithegi yegama elingukhiye le-meta? Kulezo zinjini ezimbalwa lapho ezisabheka umaki wamagama angukhiye? Ukungabaza okuthola ithrafikhi eningi (uma ikhona nhlobo). Ngenxa yesiko? Mhlawumbe. Kuyamangaza ukuthi ngisazisebenzisa.
Uthini owakho umbono ngalokhu?
Dec 16, 2007 ku-10: 44 AM
Amagama angukhiye e-Meta kungenzeka ukuthi abalulekile ezinjinini ezinkulu, kepha angenziwa ngokuzenzakalela kusuka kumathegi akho (nawo abalulekile kuthrafikhi). Futhi izincazelo ze-meta zingakhuphula isikhathi sakho esikhulu se-CTR.